Ciidamada Juba iyo Amisom oo la wareegay deegaano ay Alshabaab maamulayeen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ku sugan Jubbooyinka ayaa la wareegay deegaannada Jannaay Cabdalla iyo Far-waamo oo ku teedsan webiga Jubba.
Saraakiil ka tirsan maamulka Juba ayaa warbaahinta u sheegay in deegaanadan oo ay ka talinaysay Al-shabaab ayaa lala wareegay kadib markii dagaallo ka dhaceen, iyadoo aan la sheegin wax khasaare ah oo soo gaaray dadka deegaannadaas ku nool.
Saraakiisha ciidamada isbahaysanaya ayaa sheegay inaysan iska-caabbin xooggan kala kulmin xoogaggii Al-shabaab ee dagaalka ku jiray, waxayna intaa ku dareen inay ku raad-joogaan xoogaggii Al-shabaab ee goobahaas ka talinayay.
Madaxweynaha Soomaaliya oo Addis Ababa u jooga ka qeybgalka shirka madaxeedka Afrika